typhoon | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ဂျပန်ပင်လယ်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေ
December 2, 2009 — mmweather
ယနေ့နံနက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစံတော်ချိန် ၆းဝဝ နာရီ T2K မှ မုန်တိုင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ရာတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် အဆင့်-၁ မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ဆက်လက်၍အားလျော့လာနေပြီး မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းရွေ့လျားနေသည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
မုန်တိုင်း NIDA ၏ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ မှု အခြေအနေများကို ဤနေရာတွင် ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေခြင်းကြောင့် အမြင့်ပိုင်းတွင်တိုက်ခတ်နေသော လေစီးကြောင်းအရှိန်မြင့်တက်လာကာ မုန်တိုင်း၏ အပေါ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများသို့ အေးမြခြောက်သွေ့သော လေများစီးဝင်လာစေခြင်း၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အေးလာခြင်းနှင့် လေထုစိုထိုင်းဆ ကျဆင်းလာခြင်းတို့သည် မုန်တိုင်း NIDA ကို အားလျော့လာစေသည့် အချက်များဖြစ်ကြောင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မုန်တိုင်း NIDA သည် ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသပိုင်နက်၏ အရှေ့ဘက် ၁ဝ၅ မိုင်ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး၊ မြောက်/အနောက်မြောက်ဘက် သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၁ ကီလိုမီတာနှုန်း( တစ်နာရီလျှင် ၇ မိုင်နှုန်းခန့်) ဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါသည်။ မုန်တိုင်းရွေ့လျားနေမှုအခြေအနေအရ ပင်လယ်ပြင်တွင်သာရှိနေပြီး ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်နိုင်မည့်အခြေအနေမရှိကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါပုံတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက် 0000 UTC အချိန် နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံမှ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းခန့်မှန်းပုံဖေါ်ထားမှု ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, tropical-storm, typhoon, weather. LeaveaComment »
လမ်းကြောင်းပြောင်းသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA
December 1, 2009 — mmweather
ယနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီအချိန်ရရှိသော WUND ပုံတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ဆက်လက်အားလျော့ကာ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၃ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိရာ ယမန်နေ့က ခန့်မှန်းထားသော လမ်းကြောင်းမှ ပြောင်းလဲသွားပြန်ကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၈၅ မိုင်မှ ၁ဝ၅ မိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ဘက် ပင်လယ်အတွင်းရှိ Iwo Two ကျွန်းငယ်လေး၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၅ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေကြောင်း သိရပါသည်။
လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ဆက်လက်၍ အားလျော့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း TSR ခန့်မှန်းချက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မုန်တိုင်း၏ လမ်းကြောင်းကြိုတင်တွက်ချက်မှုများအရ ပင်လယ်ပြင်တွင်သာ ဆင်လက်ရွေ့လျားနေမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည့် အခြေအနေရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
မုန်တိုင်းအခြေအနေနှင့် ပြင်းအားအဆင့်တို့ကို ဤနေရာတွင် လေ့လာစောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မုန်တိုင်း၏ လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲ မှု အခြေအနေကို ၆ နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာန တို့မှ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပုံအား ဤနေရာတွင် လေ့လာစောင့်ကြည့် နိုင်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, typhoon, weather.2Comments »
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA အဆင့်-၃ သို့အားလျော့လာ
November 30, 2009 — mmweather
ယနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၄နာခွဲအချိန် ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသ T2K မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ် အားလျော့လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ WUND မှ လာမည့် ၅ ရက်အတွက် ခန့်မှန်းထားသော အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံတွင် NIDA သည် မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ- ၁မိုင် မှ ၂ မိုင်နှုန်းခန့်) ဖြင့်ရွေ့လျားနေပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်မှ ၁၄၅ မိုင်အထိရှိနေကြောင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။
NIDA သည် ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသ ပိုင်နက်၏ အရှေ့ဘက် ၄၅ဝ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၂၈ဝ ခန့်) တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး အရွယ်အစားအားဖြင့် ကြီးမားဆဲ (အချင်း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ၊ ၅ဝ၇ မိုင်ခန့်) ဖြစ်ကြောင်း T2K ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်လာနိုင်မည့် အန္တရာယ် (လတ်တလောအချိန်တွင်) မရှိကြောင်း မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် မိုးရေချိန် ၅ မီလီမီတာမှ ၁၅ဝ မီလီမီတာ(၆ လက္မခန့်) နှင့် မုန်တိုင်း ဗဟိုချက်အနီးတွင် ၂၅ဝ မီလီမီတာ (၁ဝ လက္မခန့်) အထိရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
၆နိုင်ငံ မိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးဌာနများမှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော မုန်တိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည့်လမ်းကြောင်းပြပုံ အရ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနေရာမှ အနောက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းရွေ့လျားကာ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် T2K ခန့်မှန်းချက်အရ လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် စူပါတိုင်ဖွန်းအဆင့်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ လျော့ကျလာနိုင်ပြီး လုံးဝ အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေအနေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, super-typhoon, typhoon, weather. LeaveaComment »
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA အဆင့်-၅ မှ တဖြည်းဖြည်းအားလျော့
November 27, 2009 — mmweather
ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် နိုဝင်ဘာ(၂၇) နံနက် ၆ နာရီ ခန့်မှန်းချက်အရ ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနပိုင်နက် အရှေ့ဘက် ၂၃၅ နော်တီကယ်မိုင်တွင်ရောက်ရှိ ဗဟိုပြုနေပြီး အင်အား အဆင့်-၅ မှ အဆင့်-၄ သို့ တဖြည့်ဖြည့် လျော့ကျလာနေသည့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် အရွယ်အစား အချင်း ၈၁၅ ကီလိုမီတာ (၅ဝ၆.၄ မိုင်) အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။
လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၃ဝ၅ ကီလိုမီတာ (တစ်နာရီ ၁၉ဝ မိုင်) နှုန်း အထိရှိကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် မိုးရွာသွန်းမှု ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၇.၈၇ လက္မ) အထိရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်း ဒီရေအမြင့် ၄၃ ပေ(၁၃.၁ မီတာ) ရှိကြောင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။ လတ်တလောအချိန်တွင် မုန်တိုင်းသည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၅ ကီလိုမီတာ(၉.၃၂ မိုင်) နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားကာ ဂျပန်နိုင်ငံ Iwo To-Chichi Jima Islands ကျွန်းများဆီသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA ဖိလစ်ပိုင်ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်
November 26, 2009 — mmweather
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် (ယနေ့) နံနက် ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် ၆းဝဝ နာရီတွင် ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာန ထုတ်ပြန်ချက်၌ အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း ကျွန်းစုများဖြစ်ကြသည့် Micronesia နှင့် Guam တို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါသည်။ မုန်တိုင်း အရွယ်အစားမှာ အချင်း ကီလိုမီတာ ၇၄ဝ (မိုင် ၄၆ဝ ခန့်) ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Bicol ဒေသ၏ အရှေ့ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၇၈ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၂၉၅ – ၃၆ဝ ကီလိုမီတာနှုန်း (တစ်နာရီ မိုင် ၁၈ဝ မှ ၂၂၅ မိုင်နှုန်းအထိ) ရှိနေကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လာမည့် ၅ ရက်အတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအရ ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသပိုင်နက် အတွင်းသို့လည်းကောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုလည်းကောင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်သည့် အနေအထား မရှိကြောင်း ကြေငြာထားပါသည်။
အောက်ပုံတွင် TSR မှ ပုံဖေါ်ထားသည့်အတိုင်း အနောက်မြောက်- မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားနေရာမှ လာမည့် ၄၈ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အရှေ့ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ဘက်မှ ဖြတ်ကျော်၍ ရေပြင် ပေါ်တွင်သာ ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ကြောင်း တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားကြသည်ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA) နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များ၏ လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, NIDA, super-typhoon, typhoon, weather.3Comments »
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NIDA အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း NIDA သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် 00:00 UTC အချိန်တွင် မနီလာမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၁၅ဝဝ ခန့် ၊ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း-ထိုင်ပေမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၇ဝဝ ခန့် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက် မိုင် ၁၆၆ဝ ခန့်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NIDA သည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိ၍ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
လာမည့် ၇၂ နာရီ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် 00:00 UTC တွင် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ပြန်လည်အားလျော့လာပြီး မနီလာမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၁၁ဝဝ၊ ထိုင်ပေမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၁၅ဝ သို့ ရောက်ရှိဗဟိုပြုနိုင်မည်ဟု TSR နှင့် JTWC ခန့်မှန်းချက်များမှ ပုံဖေါ်ရရှိပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မုန်တိုင်းဗဟို၌လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၁၅ မိုင်မှ ၁၄၅ မိုင်အထိရှိကြောင်း WUND မှ လာမည့် ၅ ရက်အတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့် ပုံတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံအရှေ့ဘက် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်သည့် သတိပေးချက် Cyclone Formation Alert မှာလည်း ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 27W မှာလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၄င်းမှာ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
Posted in Cyclone Formation Alert, Weather Alert, Weather News. Tags: 26W, 27W, NIDA, tropical-depression, tropical-storm, typhoon, weather. LeaveaComment »